जुवामा हारेपछि आफ्नै पत्नीको सामुहिक बलात्कार ! -
२०७६, १८ श्रावण शनिबार १०:०० August 3, 2019 clickonLeaveaComment on जुवामा हारेपछि आफ्नै पत्नीको सामुहिक बलात्कार !
भारतको उत्तर प्रदेशस्थित एक गाउँमा रक्सीले मातेका एक पुरुषले जुवा हारेपछि आफ्नै पत्नीलाई बलात्कारको लागि साथीहरुलाई सुम्पिएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
रक्सीले मातेका ती पुरुषले साथीहरुसँग पहिले नै गोप्य रुपमा आफ्नी पत्नीलाई ‘सेक्स’का लागि सुम्पिने बाचा गरेका थिए । जुवामा हारेपछि भने उनकी पत्नीलाई सामुहिक रुपमा बलात्कार भएको हो ।
उत्तर प्रदेशको जौनपुर जिल्लाको यो घटना हालै सार्वजनिक भएको हो । घटनापछि ती महिला अदालत पुगेकी छिन् । जब कि, प्रहरीले कुनै कारवाही अघि बढाउन नचाहेको ती महिलाको आरोप छ ।
ती महिलाका अनुसार उनका पति जँड्याहा हुन् । पछिल्लो पटक उनले साथीहरुसँग हारेपछि पत्नीलाई नै प्रयोग गरेका हुन् । रिपोर्ट अनुसार महिलाको पतिका साथी अरुण र अनिल उनको घरमा रक्सी पिउन र जुवा खेल्न आएका थिए ।
भेनेजुएला मा राष्ट्रपती निकोलास मादुरो माथि ड्रोन द्वारा आतन्कबादी हमला
२०७५, २० श्रावण आईतवार १२:१६ August 5, 2018 clickon
२०७८, २४ बैशाख शुक्रबार १०:१९ May 7, 2021 clickon
२०७६, १६ पुष बुधबार ०९:५४ January 1, 2020 clickon